> Resource > Apps > Apps ka Android Bedelka in Moto X 1 Click
Iibsatay Motorola Moto X? Waa arrin wax xiiso leh in ay leeyihiin noocan oo kale ah smartphone Android dhaldhalaalaan, soo maaha? Si kastaba ha ahaatee, marka ay timaado in kala iibsiga app ah, waxaa laga yaabaa inaad ka heli dhagaan oo ay dareemaan niyad-jab. Ma qiyaasi kartaa in aad leedahay si aad isticmaalaysa internet inaad kala soo baxdo ka barnaamijyadooda qabow in aad horey u on hore smartphone Android inay Moto X? Waxa aad qaadan doontaa waqti aad u badan.
Haddii aad tahay qof waalan oo ku saabsan, waxaad heli kartaa talo aan halkan. Taasi waa in ay isku dayaan ka Wondershare MobileTrans ama Wondershare MobileTrans u Mac . Sida software ah kala iibsiga phone xunna loogu talagalay, waxaa kuu ogolaanaysaa inaad ku wareejiso files dhexeeya telefoonada iyo kiniiniyada socda Android, macruufka iyo Symbian. Iyada oo ay caawimaad, waxaad awoodi karaa inuu wareejiyo oo dhan Chine in aad ku rakiban telefoonka jir Android inay Moto X, oo isku click. Barnaamijyadooda ka sokow, waxaa xitaa aad ku xoojiya sidii ay nuqul fariimaha qoraalka ah, xiriirada, music, sawiro, abuse call iyo videos ka phone hore Android inay Moto X.
Download software this si ay u gudbiyaan barnaamijyadooda Android inay Moto X.
Fiiro gaar ah: The Wondershare MobileTrans taageeray badan oo telefoonada Android iyo kiniiniyada. Riix halkan si aad u hesho info dheeraad ah oo ku saabsan. La soco in barnaamijyadooda nidaamka iyo barnaamijyadooda preinstalled looma oggola inay ku wareejin dhexeeya telefoonada Android. Hadda, Halkaan hoose ayaa qaadan version Windows sida tusaale.
Full Hage in ay barnaamijyadooda ka Android wareejiyo Moto X
Kuwa soo socda hanuun buuxa muujinaysaa sida loo isticmaalo Wondershare MobileTrans in ay barnaamijyadooda ka telefoonka ah Android ama kiniin wareejiyo Moto X. Hadda, ka eeg hanuunka wada.
Tallaabada 1. Orod software this kombiyuutarka
Waxa ugu horeeya ee aad samaynaysaa waa in uu ordo software MobileTrans this on computer ka dib markii la rakibey. Tani waxay keeni doonaa in ay suuqa kala hoose. Markaas, riix Start .
Fiiro gaar ah: Haddii aad rabto in lagu wareejiyo files si / ka qalab Apple ah, waxaa idinku waajib ah si loo soo dajiyo Lugood kombiyuutarka si aad shaqo software tan si sax ah.
Tallaabada 2. Isku telefoonka ah Android oo Moto X kombiyuutarka
Connect phone Android jir iyo Motorola Moto X si aad u computer ka deeruhu in fiilooyinka USB. Software MobileTrans ayaa si toos ah iyaga lagu ogaan doonaa. Markaas, sida uu na tusay in uu furmo suuqa hoose, telefoonka Android jir lagu muujiyay bidixda, iyo Moto X u muuqataa on xaq.
Tan iyo dhammaan faylasha ku cad suuqa kala aasaasiga ah waxaa loo hubiyaa oo loo gudbin karaa, waxaad u baahan tahay in ay ka saarto marks ka hor files kale marka laga reebo barnaamijyadooda. Sida xogta oo cad ka hor inta nuqul , waxaa la isticmaalo si loo soo saaro barnaamijyadooda aad ku rakiban Moto X. ah, saasuuna, sida ay doorashada si uu u hubiyo ama u uncheck.
Tallaabada 3. Transfer barnaamijyadooda ka Android inay Motorola Moto X
Hadda, bilaabaan si ay u gudbiyaan barnaamijyadooda adigoo gujinaya Start Copy . Ayaa wada hadal habka app kala iibsiga booda. In wada hadal tan, waxaad eegi kartaa boqolkiiba kala iibsiga. Marka iibsiga app la dhammeeyo, fadlan riix OK .
Isku day software si nuqul ka barnaamijyadooda ka phone Android inay Moto X.
Fiiro gaar ah: Haddii aad ku badbaadi lahaayeen barnaamijyadooda badan kombiyuutarka, waxaad isticmaali kartaa Wondershare MobileGo for Android si ay u soo dajiyo si aad Motorola Moto X.